Ahoana no hitarika ny ICO tany Soisa - Blockchain News
Renay avy amin'ny lalàna Soisa mafy Goldblum sy ny Partners, fanompoana ny mpikarakara ny ICO, ny fomba tsara indrindra hiara-miasa amin'ny Eoropeanina sy ny mpampiasa vola handamina famantarana tany Soisa.
Nahoana no maro ny olona mieritreritra ny mihazona ny ICO tany Soisa
Anisan'ny fanomezam-boninahitra izany ny endriny, – Ethereum Foundation, Tezos, famoahana, Lykke nanao Soisa malaza eo amin'ny fiaraha-monina crypto, ary Zug dia tsara toerana mba hisoratra anarana ny orinasa noho ny tsy hanahirana ny fitantanana sy ny hetra.
Ny mpitantana ny tanàna toy ny hetra manaiky BitCoins fandoavam-bola hatramin'ny 200 ariary. Fisoratana anarana ao amin'ny orinasa ihany koa dia afaka ho entina avy amin'ny fampidirana ny BTC ao amin'ny alalana drenivohitra; ny hetra crypto-mpitantana mihevitra toy ny fananana vola, ary dia mihatra araka ny tokony hetra.
ny fanaraha-maso, fisainan'i asa, ny fepetra ny tale eo an-toerana manana izay miaraka tompon'andraikitra ny asan 'ny mafy na ny tahirim-bola, ho mendri-pitokisana ho an'ny mpampiasa vola Soisa, takarina ny mpikarakara ny ICO sy manakivy scammers.
Tamin'ny voalohany sehatra, fahazoan-dalana isika fa ny mpikarakara ny ICO hitady mpiara-miombon'antoka izay afaka vola be dia be ny vola. Ankoatry ny, tokony hitarika Fahamalinana mety hevitra, mamorona tondrozotra ho an'ny tetikasa izay lasa anisan'ny White Paper, ary lasa teny ho fitaizana vola amin'ny endrika Terms sy Conditions, ary koa mijery ny vaovao ao amin'ny fampahafantarana sy ny fitaovana fampahafantarana ho an'ny fanarahan-dalàna.
Misy avo mety ho fitadiavana ny mpampiasa vola ao amin'ny dingan'ny ilay antsoina hoe Roadshow, izay midika mandefa avy tolo-kevitra ho an'ny fivoriana, mitazona famelabelarana, mamaly mpamatsy vola’ fanontaniana sy, vokatr'izany, mandray vola. Izany no hevi-dehibe ao amin'ny asa – valio ny fanontaniana mamitaka indrindra, mifanatrika, raha tsy nisy fanontaniana ny anarana ho avy.
Ny fifanarahana amin'ny mpikarakara, amin'izao dingana afaka manome mpisolovava ho toy ny mpanolo-tsaina boky ny tetikasa, ary koa mamaly fanontaniana ara-dalàna avy any ICO mpanjifa.
Rehefa mpampiasa vola lehibe dia hita, dia mampiseho manomboka ny fisoratana anarana ny orinasa: ny analogue ny LLC amin'ny didy tahirim-bola ny 20,000 ariary, CJSC – 100,000 ariary. Ao amin'ny tranga faharoa, mpanana petrabola rehetra dia tsy mitonona anarana. Azo atao koa ny hividy vonona-nanao orinasa. In mirazotra, ofisialy fangatahana dia natao ho ilaina ny fahazoan-dalana ho any amin'ny regulator, eo am-piandohan'ny tantara ao amin'ny banky sy ny fikarakarana ny fandraisana ny vola avy amin'ny mpamatsy vola madinika.
Rehetra nandray vola miditra amin'ny dingana ireo no iharan'ny hetra amin'ny faran'ny nivoahan'ny tatitra farany, ary tsy misy fahasamihafana amin'ny asa ny hetra manam-pahefana any amin'ny firenen-kafa.
Ilaina ny mamorona ny tahirim-bola ho an'ny ICO tany Soisa ?
Amin'ny maha-fitsipika, fitambaran'ny vola dia fikambanana izay mampiasa ny fanomezana na fanampiana ho an'ny sasany fandaharana izay tsy mifandray amin'ny raharaham-barotra, ary aza mandray soa avy amin'io asa.
Fanindroany: ny petra-bola dia tsy midika na asa ara-barotra, mandray vola avy amin'ny mpampiasa vola sy handoa azy indray amin'ny valisoa.
Ny tantara amin'ny TEZOS, ny mpikarakara ny izay tsy nahazo fanazavana avy amin'ny mpisolovava any Soisa ary nanaiky vola avy amin'ny mpampiasa vola amin'ny endrika fanomezana, fanahy iniana na tsia – dia ho fanazavana amin'ny fitsapana maro, mampiseho mazava tsara fa ilaina ny anjara mpahay lalàna amin'ny dingana rehetra ho an'ny andaniny sy ny ankilany. Jereo ny matianina izay mety ho tompon'andraikitra amin'ny zavatra nataony ny tolo-kevitra na.
Previous Post:Blockchain News 31 Janoary 2018
Next Post:Vokatry ny ASIC poti avy Samsung